နေ့စားလပေး မူလတန်းပြများကို ပါမစ်နစ်အဖြစ် တစ်ပါတည်းခန့်အပ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၁၈- ယခုပညာ သင်နှစ်အတွက် ခန့်အပ်မည့်နေ့ စားလပေး မူလတန်းပြများကို ပါမစ်နစ်အဖြစ် တစ်ပါတည်းခန့် အပ်နိုင်ရန်ဆွေးနွေးနေကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေ ခံပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် လိုအပ်နေသော ဆရာဆရာမရာ ထူးနေရာများကို ပြင်ပဘွဲ့ရဆရာ ဆရာမများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းခန့် ထားနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးမှ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ် သော်လည်း အဆိုပါပြင်ပဘွဲ့ရနေ့ စားလပေးများကို ပါမစ်နစ်အဖြစ် တစ်ပါတည်း ခန့်အပ်နိုင်ရန်အ တွက်ဆွေးနွေးနေကြောင်း အခြေ ခံပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
]]အစိုးရအဖွဲ့ရုံးက ခွင့်ပြု ချက်ကျတာတော့မှန်တယ်။ အခု ကမူပြဘယ်လောက်လိုတယ်၊ ထက်ပြ ဘယ်လောက်လိုတယ်ဆို တဲ့စာရင်းတွေကို လုပ်နေတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကို ခန့်ရင်နေ့စားအ ဖြစ်နဲ့ပဲခန့်မလား ပါမစ်နစ်အဖြစ်ပဲ ခန့်မလားဆိုတာတွေ ပြန်ဆွေး နွေးနေတယ်။ ဝန်ကြီးရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အီးစီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကလိုသေးတယ်။ ဒါတွေကိုပြန် စောင့်နေရတော့ သတင်းစာထဲမ ထည့်ရသေးတာ}}ဟု အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသတင်းစာသို့ ဩဂုတ်၁၈ရက် ကပြောကြားသည်။
၂၀၁၇-၂၈ပညာသင်နှစ်၏ ကျောင်းနှင့်ဆရာ၊ ကျောင်းသား စာရင်းများအပေါ် အခြေခံတွက် ချက်မှုအရ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာဖြင့် မူလတန်းပြငါးသောင်း ကျော်၊ အလယ်တန်းပြနှစ်သောင်း နှစ်ထောင်ကျော်၊ အထက်တန်းပြ တစ်သောင်းကျော် လိုအပ်နေ ကြောင်း ယခုနှစ်တွင်အထက်တန်း ကျောင်းနှင့် ကျောင်းခွဲများအဆင့် တိုးမြှင့်မှုအပါအဝင် အထက်တန်း ပြလိုအပ်နေမှုမှာ နှစ်သောင်းကျော် အထိရှိနေကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ စာရင်းများအရသိရသည်။
]]ဘယ်နေ့လောက် ခေါ်မလဲ ဆိုတာတော့ပြောလို့ကို မရသေး ဘူး။ ဒီလထဲလည်း မသေချာ လောက်သေးဘူး}}ဟု ဦးကိုလေး ဝင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေ ဖြင့် နေ့စားလပေး ဆရာ၊ ဆရာမ ခေါ်ယူမှုကိုနှစ်နှစ်ခန့် ရပ်ဆိုင်းထား ခဲ့ရာမှ သုံးနှစ်အတွင်းအဆင့်တိုး ခဲ့သော ကျောင်းအရေအတွက်များ ပြားလာခြင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများကြောင့် ဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်မှာ များ ပြားလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
အင်းဝဘုရင်တနင်္ဂနွေမင်းကြီးတည်ထားခဲ့သည့် လေးကျွန်းမာရ်အောင် စေတီတော်အား ရွှေထီးတော်အသစ် ပြန်လည်တင်လှူ
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ကျောင်းများကို ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်မည်
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက အစိုးရအနေဖြင့် မြေတန်ဖိုးကို သုညရာခိုင်နှုန်းအထိ??
‘အနာဂတ်ကလေးငယ်များ ဘဝသာယာလှပဖို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို တားဆီးကြပါစို့’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသိပညာ??